: D ပုံသဏ္ဍာန်ချုပ်ကိုင်နှင့်အတူ Ergonomics နှင်းရေမှုတ်များ Pusher - တရုတ် Richina
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: H533
ယေဘုယျအား Length: 1250mm
ဦးခေါင်းအရွယ်အစား: * 230mm 540
Richina Ergonomics နှင်းရေမှုတ်များ Pusher ရှည်လျားတည်မြဲဖြစ်နှင့်သာလွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ပူဇော်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီ Ergonomics နှင်းရေမှုတ်များ Pusher ကသင်၏အလုပ်ကပို comfortable.The အောင်ကို C-ကွေးအမှုန့် coated သံမဏိလက်ကိုင်နှင့်အတူ Ergonomics နှင်း Pusher အဆိုပါဓါးအပေါ်အကြမ်းခံသတ္တုအစွန်းနှင့်အတူအာဏာနှင့် tool ကိုဘဝဖြတ်တောက်တိုးမြှင့်ဖို့။ ထိုအခါ Ergonomics နှင်းရေမှုတ်များ Pusher’s blade width is 21″ is ideal for shoveling and pushing snow.
Ergonomics နှင်း Pusher ရေမှုတ်များ
အလွယ်တကူမိုဃ်းပွင့်ကိုဖယ်ရှားဘို့နှင်းဂေါ်ပြားနှင့် pusher combo
သင့်ရဲ့အလုပ်ထက်ပိုအဆင်ပြေစေကို C ကွေး poweder အင်္ကျီကိုသံမဏိလက်ကိုင်
နှင်း pusher ဦးခေါင်းအရွယ်အစား 540 * 230mm ။ PP ပစ္စည်း
မဆို color ကိုမိုဃ်းပွင့်ဂေါ်ပြားခေါင်းကိုအဘို့အ avialable ဖြစ်ပါသည်
မိုဃ်းပွင့် pusher ဦးခေါင်းများအတွက်ချိတ်ဆက် snap-lock နှင့်ကိုင်တွယ်
စံပြပလတ်စတစ်နှင်း Pusher ထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရှာဖွေနေပါသလား ငါတို့သည်သင်တို့ဖန်တီးမှုအတွက်အကူအညီရရန်အကြီးအစျေးနှုန်းများမှာကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ လူအားလုံးတို့သည်ကွေးနှင်း Pusher ကိုင်တွယ်အရည်အသွေးကိုအာမခံဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ Poly ၏တရုတ်မူလအစစက်ရုံများမှာ နှင်းရေမှုတ်များ Pusher Combo ။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ပလပ်စတစ်အိတ်ဆောင် Utility ကိုခေါက်မော်တော်ကားနှင်းရေမှုတ်များ